कर्मचारी नियुक्तिको विवादले २३ दिनदेखि कर्णाली प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी – Health Post Nepal
२०७७ कार्तिक २१ गते ९:१३
पटक–पटक कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा विवाद हुँदै आएको कर्णाली स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुनः उपकुलपतिले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्ति गर्न थालेपछि विवाद चर्किएको छ।
उपकुलपतिले सम्पर्क कार्यालय ललितपुरबाटै स्वास्थ्य संकायको डिन नियुक्ति गरे पनि जुम्लामा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
गत असोज २८ गतेदेखि केन्द्रीय प्रशासन र शैक्षिक प्रसशानमा तालाबन्दी गरिएको छ। अहिलेसम्म न त प्रतिष्ठानले आन्दोलनरत कर्मचारीसँग वार्ताका लागि कुनै पहल नै थालेको छ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले अनावश्यक कर्मचारी भर्ति गर्दै लगेको भन्दै प्रतिष्ठानको कर्मचारी कल्याणकारी समाजले तालाबन्दी गरेको हो। गत असोज २६ गते नै प्रतिष्ठानको सम्पर्क कार्यालय ललितपुरबाट उपकुलपति राजेन्द्रराज वाग्लेले स्वास्थ्य संकायको डिनमा प्राडा मुन्निराज क्षेत्रीलाई नियुक्ति गरेका थिए।
अहिले सोही नियुक्तिलाई खारेज गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ। यस्तै, प्रतिष्ठानमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारी बाहिर काम गर्न नपाउने र दोहोरो सुविधा भोग गर्न नपाउने ऐनमा उल्लेख भए पनि मेडिकल डिन रेशम रानाको विषयले पनि प्रतिष्ठानका कर्मचारीभित्र तिव्र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ।
मेडिकल डिनका रुपमा नियुक्ति भएका रानाले एसएसबीएच भन्ने प्राजेक्टबाट सुविधा लिनुका साथै ऐनेस्थेसिया सहायक कोर्ष कोर्डिनेटरको जिम्मेवारीमा रहेर पनि सुविधा लिएको कल्याणकारी समाजको आरोप छ। समाजका एक पदाधिकारीका अनुसार यसरी एउटै संस्थाभित्र लिएर तेहेरो सुविधा लिनु गैरकानुनी भएको बताए।
साथै कर्मचारीहरुले हालका अस्पताल निर्देशकका रुपमा रहेका डा. मंगल रावललाई पनि अनियमित तवरले नियुक्ति दिइएको आरोप लगाइएको छ। पहिले मेडिकल डोइरेक्टर पद रहेकोमा प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्ले त्यसलाई खारेज गरेर अस्पताल निर्देशकको रुपमा बनाइएको छ। पहिले मेडिकल डाइरेक्टरका रुपमा डा. पुजन रोकाया थिए।
पछि पुजन रोकायालाई मेडिकल डाइरेक्टरबाट हटाइ डा. मंगल रावललाई अस्पताल निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो। अहिले यो विषय पनि प्रतिष्ठानभित्र विवादित नै बनेको छ। कारण अस्पताल निर्देशकका रुपमा अर्का धर्मराज गोसाइ पनि छन्।
अन्य प्रतिष्ठानहरुमा निर्देशकमा एक जनाभन्दा बढी नभएको अवस्थामा कर्णाली प्रतिष्ठानमा दुई जना हुनु अनावश्यक भएको असन्तुष्ट कर्मचारीको ठहर छ।
यता प्रतिष्ठानका रजिष्टार विश्वराज काफ्लेले स्वास्थ्य संकायका डिनको नियुक्तिका सम्बन्धमा भने उपकुलपतिले आवश्यकताअनुसार नियुक्ति गर्न पाउने बुँदा ऐनमा उल्लेख भएकाले ठूलो विषय नभएको बताउँछन्। हाल आफू कोरोना संक्रमित बनेर आइसोलेसनमा बसेकाले पनि वार्ताको लागि वातावरण नबनेको उनको भनाइ छ।
वार्ताका लागि भनेर काठमाडौंबाट एक साताअघि हिँडेका उपकुलपति वाग्लेसहितको टोली अहिले जुम्लाको एक होटलमा बसिरहेको छ। तीन दिनदेखि होटलमा बसे पनि वार्ताका लागि कुनै पहल नथाल्नुले उपकुलपतिले प्रतिष्ठानलाई कर्मचारी भर्तिकेन्द्रबाहेक अरु केही बनाउन नखोजेको समाजका एक पदाधिकारीले बताए।
असन्तुष्ट पक्षले डिन नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुका साथै कोरोना उपचारमा खटिएका कर्मचारी र चिकित्सकको जोखिमभत्ता पनि तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। यस्तै अहिले अस्पताल निर्देशक रहेका डा. मंगल रावलको विषयमा पनि विवाद छ। उनले पनि मनपरी सेवा सुविधा लिने गरेको आरोप छ।
अर्का निर्देशक धर्मराज गोसाई अधिकतर समय काठमाडौंमै बस्ने गरेका छन्। दुई÷दुई महिनाको अन्तरमा जुम्ला फर्किने र कामै नगरी बस्ने गरेको त्यहाँका कर्मचारी कल्याणकारी समाजका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए।